Golaha Shacabka oo birri yeelanaya kulan gaar ah | KEYDMEDIA ONLINE
Golaha Shacabka oo birri yeelanaya kulan gaar ah
Madaxweynaha muddadu ka dhamaatay Farmaajo, ayaa birri ku laaban doona Golaha Shacabka, isagoo ku soo hungoobay meel marinta muddo kordhin uu Aqalka hose u sameeyay hay’adaha Dowladda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Dowladda Fadaraalka Soomaaliya, ayaa lagu wadaa inuu kulmo berri, waxaana loo madlan yahay dhageysiga hadal jeedinta Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Fariin gaaban oo loo diray Xubnaha Golaha Shacabka ayaa lagu yiri, “ Mudane Xildhibaan birri oo Sabti ah oo ay taariikhdu tahay 1-da May, waxaa jira kulan gaar ah oo Ajandihiisu yahay hadal Jeedinta Madaxweynaha JFS, saacaadda 09:00 subaxnimo.”
Kulankaan ayaa dhashay kadib markii Madaxweynayaasha Maamullada Galmudug iyo HirShabeelle ay diideeden muddo kordhinta oo Golahaan meelmariyay, isla markaaan uu ku raacay Sii-hayaha Xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, taas oo Farmaajo ku qasabtay inuu dalbado kulankaan.
Inkastoo ay jiraan doodo iska hor imaanaya oo ku saabsan u jeedka ka danbeeya kulankan, ayaa hadana waraaq ka soo baxday Xaafiiska Guddoomiyaha Aqalka hoose, Maxamed Mursal, lagu sheegay in shirkaan aan uusan ku lug lahayn wax la xariira kalsooni kala laabasho, ka dhan ah Xukuumadda.
Farmaajo oo la’aaminsan yahay, inuu isku duwday koox Xildhibaanno ah oo shacab tunta, ayaa kulankaan ku laaban doona, isagoo Baarlamaanka dib ugu celin doona muddo kordhintii ay sameeyeen 12 April, 2021, taas oo meel mari weysay, dalkana u hor seedday dagaallo.